के सर्जिकल मास्क र एन ९५ मास्क धोएर पुन: लगाउन मिल्छ ? धुन मिल्दैन भने एउटा मास्क कति दिन सम्म लगाउन सकिन्छ त ? डाक्टरको मुखबाटै जान्नुहोस (भिडियो) «
के सर्जिकल मास्क र एन ९५ मास्क धोएर पुन: लगाउन मिल्छ ? धुन मिल्दैन भने एउटा मास्क कति दिन सम्म लगाउन सकिन्छ त ? डाक्टरको मुखबाटै जान्नुहोस (भिडियो)
प्रकाशित मिति : ९ भाद्र २०७७, मंगलवार ०९:५१
काठमाडौँ, ९ भदौ । कोरोना भाइरस कोभिड-१९ को प्रकोप नेपालमा बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । सुरुका दिनमा तराई र सुदुरपश्चिममा बढी संक्रमण देखिएको थियो । तर अहिले काठमाडौँ उपत्यका संक्रमणको केन्द्र बन्दै गएको छ ।